उत्तर कोरियामा अ ग्ला भवनका झ्याल किन ब न्द गरिन्छ ?
Homeबिबिधउत्तर कोरियामा अ ग्ला भवनका झ्याल किन ब न्द गरिन्छ ?
एजेन्सी । विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमयी देश मानिने उत्तर कोरियाका प्रमुख किम जोङ उन पनि आफ्नो देश भित्रका गतिविधि बाहिरी दुनियाँबाट गोप्य राख्न चाहन्छन् । यस्तोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दक्षिण कोरियाका मून जेइनसँगको भेटवार्तापछि भने किमले अन्य मुलुकहरुसँग देशको सम्पर्क बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर उल्टै उनले सुरक्षा व्यवस्था झन कडा बनाइरहेको बताइएको छ ।
केही समय अगाडि मात्र किमले जासुसीका घटना विरुद्ध राजधानी प्योङयोङका थुप्रै अग्ला भवनहरुको झ्याल पूर्ण रुपमा बाहिरबाट नदेखिनेगरी ब्लक गराएका हुन् । देशका भित्री क्रियाकलाप सम्बन्धी विभिन्न खुलासा र सैन्य क्षेत्र लगायतका जानकारी पनि सार्वजानिक भएपछि उत्तर कोरियाले जासुसीबाट जोगिन यस्तो उपाय अपनाएको बताइएको छ । यसले जासुसीको विषयमा किम कति गम्भीर छन् भन्ने संकेत पनि दिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
दक्षिण कोरियास्थित एक संचार संस्थाका लागि काम गरिरहेका चाड ओ केरोल उत्तर कोरियाको निर्माणधीन परियोजनाको निरीक्षण गरिरहेका थिए जसबेला उनले त्यहाँ अनौठो दृश्य फेला पारेका हुन् । देशका मुख्य कार्यालयहरु अवस्थित भवनका सबै माथिल्ला तलाहरु आश्चर्यजनक रुपमा कालो बनाइएको उनले देखेका हुन् ।
अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था भएपनि उनीहरु यसको तस्बिर लिन सफल भएका हुन् । यसरी सयौँ सङ्ख्यामा रहेका होटल र अपार्टमेन्टका झ्याल बाहिरबाट केही नदेखिने गरि कालो सिसा लगाइएको र कतिपय भवनका छत त ढलान समेत गरिएको उनले बताए । एक वर्ष अगाडिका तस्बिरसँग तुलना गर्दै उनले खबर स्पष्ट पारेका हुन् । यसरी होटलमा बस्न आउने पर्यटकहरुले बाहिरी गतिविधिबारे केही थाहा नपाउन् भनेर पनि सबै झ्याल ब्लक गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ । प्योङयोङका अग्ला अपार्टमेन्टहरुमा उच्च सरकारी अधिकारी र तिनका परिवारहरु बसोबास गर्दछन् । – सिएनएन
यु रेनियमले गर्न सक्छ नेपालको अ र्थतन्त्र का यापलट, नेपालको प्रतिव्यक्ति आय संसारमै सबैभन्दा धेरै
भे टिएनन् अन्नपूर्ण हि मपहिरोमा ह राएका चार विदेशीसहित सातजना
tadalafil generic – buy tadalafil online tadalafil prices
propecia topical gel – propecia drug if i stop taking propecia
what’s propecia – http://propechl.com/ propecia nz buy
buy tadalafil generic online – http://xtadalafilp.com/ generic tadalafil online
Mwjcza – http://virviaga.com/ buy viagra mississippi
Foczxm –amodafinil prescription Oervwd sbdrho
Qwscwf – generic ed drugs Hzuxop fpqeox
Nocyta – furosempi.com Ezjqoc axkuks
online apotheke vardenafil – buy vardenafil online vardenafil coupons
सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजाने
काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजाने भएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार (भोलि) दिउँसो २ बजे संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइएको भए पनि उनी नजाने प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।“प्रधानमन्त्रीको नाममा पार्टी […]
काठमाडौँ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको हो । सो समयमा ७ लाखको अधिकतम सीमा थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । तर यसलाई बिलकुलै सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । आर्थिक वर्ष […]
काठमाडौं । बङ्गलादेशबाट खरीद गरिएको ३२ हजार पाँच सय मेट्रिकटन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ । सरकार–सरकारबीच (जिटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरीद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा सो परिमाणका युरिया मल आइपुगेको हो । जिटुजी सम्झौता अनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया […]
आजकल मानिसहरू जतिखेर पनि स्मार्टफोनमा झुण्डिरहने भएकाले आँखामा खराब असर परिरहेको हुन्छ । बच्चाहरू पनि आँखा कमजोर भएर चश्मा लगाउन थालेका छन् । त्यसैले मोबाइल, ट्याब्लेट र ल्यापटपको प्रयोग कम गर्नुका अलावा तपाईंले स्वास्थ्यवर्द्धक केही [...]
काहीँ हामी पनी सेनिटाइजरको नाममा विष त दल्दै छैनौं ?
चीनले १ घण्टामा पृथ्वीको ३ चक्कर लगाउन सक्ने विमान बनायो
एजेन्सी – चीनले उड्ने हा’इपरसोनिक विमानको परीक्षणका लागि एक हा’इपरसोनिक टनेल बनाइरहेको छ । यो टनेलमा विमानको परीक्षण २३ हजार माइल प्रतिघण्टा अर्थात ३७ हजार १२ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हुने छ । चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेन्जका शोधकर्ता हान गुइलईले एक अनलाइन ले’क्चरमा भनेका छन्, ‘जे एफ–२२ टनेलमा विमानको […]